Vaovao - “CHINAPLAS 2012 ″ Fampirantiana ny laharana laharana faha-2 any Azia sy ny laharana faharoa manerantany ho an'ny laharana faha-2 miverina any Shanghai amin'ny volana aprily
“CHINAPLAS 2012 ″ Fampirantiana ny laharana laharana faha-2 any Azia sy ny fampiroboroboana ny plastika sy plastika laharana faha-2 miverina any Shanghai amin'ny volana aprily
“CHINAPLAS 2012 ″ (Fampirantiana ny plastika sy ny indostria vita amin'ny tany vita amin'ny harin-tany China faha-26) dia hiverina any Shanghai ny 18 ka hatramin'ny 21 aprily 2012 ary hatao ao amin'ny Center Center International Expo Shanghai Pudong.
"Fampirantiana volo sy plastika iraisam-pirenena ho an'ny CHINAPLAS" dia natao tamin'ny 1983 ary nahomby 25 taona. Izy io irery no fampirantiana orinasa Rubber and Plastics industry izay notohanan'ny EUROMAP, ary i Sina irery no nandrombaka ny Global Exhibition Industry Association. (UFI) fampisehoana plastika nahazo fankatoavana sy fampisehoana indostria fingotra. Fikambanana plastika eto an-toerana sy avy any ivelany ary fikambanam-be vita amin'ny orinasa fingotra sy ambany no manohana tanteraka ny "Fampirantiana amin'ny fambolena vita amin'ny plastika sy plastika" CHINAPLAS "dia nanjary sehatra lehibe iray hidiran'ny orinasa avy amin'ny firenena samihafa hiditra an'i Shina sy ireo tsena mipoitra any Azia, ary hametraka tambajotram-pizara iraisam-pirenena.
"CHINAPLAS 2011 ″ dia nikatona tamim-pahombiazana tamin'ny 20 Mey. Nahasarika fampirantiana 2.435 avy tamin'ny firenena sy faritra 34 ny fampirantiana, nahatratra haavo vaovao, mihoatra ny 180.000 metatra toradroa, ary eken'ny indostria ho Chinaplas iraisampirenena roa lehibe indrindra. Tsy nisy toy izany ny hetsika efatra andro, ary nahatratra hatrany amin'ny avo lenta ny isan'ny mpitsidika, nahatratra 94.084, fitomboana 15,5% raha oharina tamin'ny fotoam-pivoriana teo aloha, izay 20,27% no mpitsidika avy amin'ny firenena sy faritra any ivelany.
Tamin'ny 18-21 aprily 2012, “CHINAPLAS 2012 ″ niverina tany Shanghai New International Expo Center. Hahatratra haavo vaovao ny mizana. Ny faritra fampirantiana dia antenaina hahatratra 200.000 metatra toradroa, ao anatin'izany ny faritra fampirantiana vokatra 11 ary ny trano heva 11 / isam-paritra dia mitazona ny efitrano 17 rehetra atsinanana, andrefana ary avaratra an'ny New International Expo Center.
Ny drafitra dimy taona vaovao an'i Shina, manomboka amin'ny dinamika vaovao
Mandritra ny vanim-potoana "Drafitra Dimy ambin'ny folo ambin'ny folo taona" (2011-2015), hifantoka amin'ny fampivoarana ireo indostria misandratra fito miompana amin'ny fiarovana ny angovo sy fiarovana ny tontolo iainana, teknolojia fampahalalana ho an'ny taranaka vaovao, indostria biolojika, famokarana fitaovana avo lenta, angovo vaovao, fitaovana vaovao ary fiara misy angovo vaovao. Ao anatin'ny dimy taona ho avy, ny fampiroboroboana ireo indostria toy ny kiran-tsaina, angovo rivotra, angovo azo avy amin'ny masoandro ary ny fiaran'ny angovo vaovao dia hiteraka fangatahana fitaovana teknolojia avo lenta, fitaovana novaina, bioplastika, fingotra manokana ary fitaovana fanodinana angovo azo antoka. , ary hampiroborobo ny fanavaozana ny sehatry ny plastika sy ny fingotra.
Shanghai-iray amin'ireo faritra matotra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy indostrialy ao Shina
东 I Sina Atsinanana dia iray amin'ireo faritra haingana sy matotra indrindra amin'ny toekaren'i Shina, ary izy io koa dia R & D manan-danja sy toha-pamokarana ho an'ny akora plastika. Tamin'ny 2010, ny vokatra vokarin'ny plastika any Sina Atsinanana dia nahatratra 24,66 tapitrisa taonina, nahatratra 42% ny vokatra totalin'ny firenena. Shanghai no ivon-tanin'i Sina Atsinanana ary fonenan'ny ankamaroan'ny mpanamboatra vokatra vita amin'ny fingotra sy milina. Tamin'ny 2010, ny vokatra totalin'ny vokatra plastika any Shanghai dia 2.04 tapitrisa taonina, ary ny totalin'ny vokatra resina (ao anatin'izany ny polyester) dia 4,906 tapitrisa taonina, fitomboan'ny 27% noho ny 2009. Amin'izao fotoana izao, Shanghai dia namorona tetikady fampandrosoana miaraka amin'ny avo atiny teknolojia sy sanda ambony be.
Mandritra ny vanim-potoana "Drafitra Dimy ambin'ny folo taona", hifantoka amin'ny famolavolana fitaovana vaovao toy ny plastika injeniera vaovao, alloys plastika, fitaovana vita amin'ny fanitsiana, fitaovana fanamboarana sy haingon-trano, kojakoja automatique sy faritra haingon-trano anatiny sy ivelany ny Shanghai. amin'ny injenieran'ny fampahalalana sy fifandraisana elektronika. , Toy ny fitaovana kristaly ranon-javatra polymer, fitaovana tsy hita maso, sns., Hahafeno ny fepetra takian'ny tetik'asa lehibe sy lehibe toy ny aérospace, injeniera an-dranomasina, herin-drivotra, fanamboarana fitaterana an-tanàn-dehibe. Noho izany, ny governemanta sinoa dia handray ny "Drafitra Dimy ambin'ny folo ambin'ny folo taona" ho fotoana iray hampiroboroboana amin'ny fomba mahery vaika ireo fitaovana vaovao sy vokatra vaovao miaraka amin'ny atiny teknolojia avo lenta ary manome lanja avo lenta, ary mampiditra vokatra, teknolojia ary vahaolana avo lenta manerantany hihaona amin'ny fitakiana avo lenta amin'ireo indostria any ambanivohitra isan-karazany. Fitarainana. "Fampiratiana iraisam-pirenena momba ny fingotra sy plastika CHINAPLAS" dia manaraka ny firoboroboan'ny indostria ary mampiditra vokatra vaovao erak'izao tontolo izao ho an'ny tsena sinoa sy aziatika.
Makà toerana fampiratiana tsara ary ankafizo ireo tolotra fampiroboroboana tsara indrindra
Mpampiranty maro no namandrika trano heva amin'ny taona ho avy mialoha, ary matoky tena fa hiomana amin'ny seho hafa amin'ny fampirantiana manaraka. Afaka miditra avy hatrany amin'ny tranokalan'ny fampirantiana ireo orinasa handefasana rindranasa booth, handray anjara amin'ity hetsika indostrialy ity ary hankafy ny fampiratiana «CHINAPLAS 2012 International Rubber and Plastics Exhibition». Ny serivisy fampiroboroboana tsara indrindra omen'ny orinasa.
Ny mpitsidika dia afaka misoratra anarana amin'ny Internet ihany koa mba hitsidika ny fampirantiana amin'ny taona manaraka, hanafoana ny saram-pidirana RMB 20 ary hahazo tombony maro.
Fotoana fandefasana: Mey-21-2020